चीन निन्जा कोर्स निर्माण र कारखाना | हाइबर प्ले उपकरण
निन्जा कोर्सहरू अवरोध कोर्सहरू हुन् जसले शक्ति, धीरज, समन्वय, फुर्तिलो र सन्तुलनलाई चुनौती र सुधार गर्दछ। खेलाडीहरूले अन्त्यबिन्दुमा पुग्नु अघि निन्जा जस्ता धेरै चरणहरू खाली गर्नु पर्छ। क्षेत्रहरूमा र आवश्यकको रूपमा निर्भर गर्दै, उपकरणहरूको सेटले 30० भन्दा बढी चरणहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा छनौट गर्न र मिलाउन सक्छ। निन्जा कोर्स खेल शैली ईन्डोर खेल मैदानमा हस्ताक्षर खेल वस्तुको लागि एक राम्रो विकल्प हो।
प्रत्येक निन्जा योद्धामा लेन र अवरोधहरूको संख्या ग्राहकले अनुरोध गरेको क्षमता साथै पाठ्यक्रम निर्माण हुने क्षेत्रको आकारमा निर्भर गर्दछ। हामी difficulty 45 भन्दा बढि अवरोधहरू प्रदान गर्दछौं जुन कठिनाईका विभिन्न स्तरहरूसँगका छन जुन मानिसहरू स्वास्थ्यको हरेक तहको चुनौती दिन सक्छन्। निन्जा कोर्स ट्राम्पोलाइन पार्क, एफईसी, खेल केन्द्र, प्रशिक्षण सुविधा वा आरोहण जिमका लागि उत्कृष्ट फिट हो।
निन्जा कोर्सहरू अवरोध कोर्सहरू हुन् जसले शक्ति, धीरज, समन्वय, फुर्तिलो र सन्तुलनलाई चुनौती र सुधार गर्दछ। निन्जा कोर्सले आगन्तुकहरूलाई ट्रेन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र रमाइलो र सुरक्षित वातावरणमा अन्वाइन्ड गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक निन्जा कोर्समा लेन र अवरोधहरूको संख्या ग्राहकले अनुरोध गरेको क्षमता साथै पाठ्यक्रम निर्माण हुने क्षेत्रको आकारमा निर्भर गर्दछ। हामी difficulty 45 भन्दा बढि अवरोधहरू प्रदान गर्दछौं जुन कठिनाईका विभिन्न स्तरहरूसँगका छन जुन मानिसहरू स्वास्थ्यको हरेक तहको चुनौती दिन सक्छन्। निन्जा कोर्स ट्राम्पोलाइन पार्क, एफईसी, खेल केन्द्र, प्रशिक्षण सुविधा वा आरोहण जिमका लागि उत्कृष्ट फिट हो।
१ फोम चटाई
Ight उचाई: १-30--30० सेमी (9.१-११.-11 मा)
Clean सफा र मर्मत गर्न सजिलो
• बहु रंग विकल्पहरू
२. अतिरिक्त स्पन्ज
Ight उचाई: cm० सेमी (११..8 इन्च)
। अतिरिक्त संरक्षित
Pla. प्लेटफर्म, स्तम्भ प्याडि।
अवरोध र स्तम्भहरू बीच प्लेटफर्महरू चोट जोखिमहरूलाई कम गर्न फोमको साथ प्याडेड छन्।
सुरक्षा जालहरू बृद्धि गरिएको सुरक्षाको लागि पाठ्यक्रमको किनारमा स्थापना गर्न सकिन्छ र उन्नत कोर्सहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ। तिनीहरू विशेष गरी उपयोगी हुन्छन् जब कोर्स अन्य आकर्षणको छेउमा अवस्थित हुन्छ।
निन्जा कोर्सहरू अवरोध कोर्सहरू हुन् जसले शक्ति, धीरज, समन्वय, फुर्तिलो र सन्तुलनलाई चुनौती र सुधार गर्दछ। निन्जा कोर्सले आगन्तुकहरूलाई ट्रेन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र रमाइलो र सुरक्षित वातावरणमा अन्वाइन्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रत्येक निन्जा कोर्समा लेन र अवरोधहरूको संख्या ग्राहकले अनुरोध गरेको क्षमता साथै पाठ्यक्रम निर्माण हुने क्षेत्रको आकारमा निर्भर गर्दछ। हामी difficulty 45 भन्दा बढि अवरोधहरू प्रदान गर्दछौं जुन कठिनाईका विभिन्न स्तरहरूसँगका छन जुन मानिसहरू स्वास्थ्यको हरेक तहको चुनौती दिन सक्छन्। निन्जा कोर्स ट्राम्पोलाइन पार्क, एफईसी, खेल केन्द्र, प्रशिक्षण सुविधा वा आरोहण जिमका लागि उत्कृष्ट फिट हो।
अघिल्लो: ट्राम्पोलिन पार्क
अर्को: ठूलो बल पूल